The Gardener: ကိုယ့်ကိုယ်ကို နားလည်ခြင်း၊ တစ်ပါးသူကိုနားလည်ခြင်း။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို နားလည်ခြင်း၊ တစ်ပါးသူကိုနားလည်ခြင်း။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့ အသိဥာဏ်အမြင်ရခြင်းဟာ သိမှု၊နားလည်မှု(အမောဟ)နဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်း မသိမှု(မောဟ)ဟာ စိတ်ဆင်းရဲမှု၊ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သိမှုကသာလျှင် ကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်စေနိုင်ပါတယ်။ သိနားလည်မှုဟာ ဒုက္ခဆင်းရဲပိတ်ဆို့နေတဲ့ တံခါးအတွက် လွတ်မြောက်စေတဲ့သော့တံနဲ့လည်းတူပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ သိနားလည်မှုကို မလေ့ကျင့်ဘူး၊ မပျိုးထောင်ဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ကိရိယာတစ်ခုကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချပြီး ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရော၊ တခြားသူတွေကိုပါ စိတ်ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတွေက လွတ်မြောက်အောင်မလုပ်သလိုဖြစ်နေပါတယ်။ အချစ်စစ်ဟာလည်း စစ်မှန်တဲ့နားလည်မှုကနေသာ ဖြစ်တည်နိုင်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အားထုတ်တဲ့ ကမ္မဌာန်းတရားဟာဆိုရင် ရပ်တန့်လိုက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းအောင်ပြုလုပ်လိုက်တာပါပဲ။ ပိုပြီးနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ကြည့်မြင်တာပါပဲ။ ဒါဟာ သိနားလည်မှုကို ပိုမိုတိုးတက်လာစေဖို့ အထောက်အကူပြုတာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်စီမှာ သိနားလည်မှုမျိုးစေ့တွေရှိပါတယ်။ အဲဒါဟာ ဘုရားပါပဲ။ ဒါဟာ ဗုဒ္ဓပါပဲ။ တကယ်လို့ သိနားလည်မှုလေးကို ခင်ဗျားငြင်းပယ်တယ်ဆိုရင် အဲဒါဟာ ဘုရားကို သံသယ၀င်တာ၊ ဗုဒ္ဓကိုသံသယ၀င်တာပါပဲ။
ဂန္ဒီကြီးက မေတ္တာတရားဟာ လွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့အင်အားပဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာ သူက ရန်သူကို မေတ္တာထားချစ်ခင်ဖို့ပြောလိုက်တာပါပဲ။ တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူဟာ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တယ်၊ ကျွန်တော်တို့ကို ချေမွဖျက်စီးတယ်၊ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုနဲ့ မတရားမှုတွေကို ပျိုးကြဲတယ်ဆိုရင်တောင် ကျွန်တော်တို့ သူတို့ကို ချစ်ရပါမယ်။ ဒါဟာလည်း Jesus ( ယေရှူ) ရဲ့ သတင်းစကားပါပဲ။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရန်သူကို ဘယ်လိုချစ်ကြမလဲ။ ဒီလိုချစ်နိုင်ဖို့တစ်နည်းပဲရှိပါတယ်။ ရန်သူကို နားလည်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူက ဘာလို့ဒီလမ်းကိုလိုက်တာလဲ ၊ သူဘယ်လိုအကြောင်းခံကြောင့် ဒီလိုဖြစ်သွားတာလဲ၊ သူဘာလို့ကျွန်တော်တို့လိုမမြင်နိုင်တာလဲဆိုတာတွေကိုနားလည်ဖို့ကြိုးစားရပါမယ်။ လူတစ်ယောက်ကို သေချာနားလည်လိုက်တာ၊သိလိုက်တာဟာ သူ့ကိုချစ်နိုင်ဖို့နဲ့လက်ခံနိုင်ဖို့ပါပဲ။ တကယ်လို့ ရန်သူတစ်ယောက်ကို ချစ်ခင်လက်ခံလိုက်တာနဲ့သူ့ကို ရန်သူအဖြစ်ကနေ ရပ်စဲပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီ။ ရန်သူကိုချစ်ပါဆိုတာဟာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ချစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ သူဟာ ရန်သူမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ရန်သူဆိုတဲ့သူပျောက်သွားပါပြီ။
လူတစ်ယောက်ကိုချစ်ဖို့ဆိုရင် သူ့ကို သိနားလည်လာတဲ့အထိ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကြည့်မြင်နိုင်မှပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ နားလည်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင် ရန်သူနေရာမှာရှိနေတဲ့သူကို ချစ်နိုင်ဖို့၊လက်ခံနိုင်ဖို့ဖြစ်လာတာပါပဲ။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ်ရာလည်းရောက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလက်ခံလိုက်ရာလည်းရောက်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ဖြစ်၊ခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖြစ် သိနားလည်မှု ဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုအတွက် အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို မေးခွန်းထုတ်နေစရာမရှိပါဘူး။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စကားပြောတဲ့အခါမှာ အလှည့်ကျအပြန်အလှန်ပြောဆိုကြတာကို သတိထားမိမှာပါ။ ဒါဟာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ပိုနားလည်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်က ကိုယ်ပြောတာကို နားလည်မယ်လို့စိတ်ချထားတဲ့အတွက်သာ စကားစမြည်ပြောဆိုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ တခြားတစ်ယောက်ကို ပိုနားလည်လာတယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိုနားလည်လာတာပါပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုနားလည်လာတဲ့သူဟာလည်း တစ်ခြားသူကို ပိုပြီးနားလည်လာတာပါပဲ။ ဒီနှစ်ခုဟာ ဆက်စပ်နေတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တကယ်သိဖို့ တခြားသူတွေကိုသိဖို့လိုသလို၊ တခြားသူတွေကို တကယ်သိနားလည်ဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တကယ်သိနားလည်ဖို့လိုပါတယ်။
Translated by Zephyr.
ဒီစာကို THICH NHAT HANH ရေးတဲ့ Living Buddha, Living Christ ဆိုတဲ့စာအုပ်ကနေဘာသာပြန်ပါတယ်။ Understanding ourselves helps us understand others ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးပါပဲ။ ဒီစာအုပ်လေးကို အတော်လေးသဘောကျပါတယ်။ THICH NHAT HANH ဟာ ဗီယက်နမ်က ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ FB မှာလည်း သူ့ရဲ့ page ရှိပါတယ်။ မာတင်လူသာကင်းဂျူနီယာက THICH NHAT HANH ကို နိုဗယ်ဆုအတွက် နာမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေက ချစ်ခင်လက်ခံတဲ့ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာတရားကို မျှမျှတတသဘောထားတဲ့သူတော်ကောင်းတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ကဗျာဆရာတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကို ခရစ်ယာန်တွေရော၊ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပါ အံ့အားသင့်ကြပါတယ်။ သူ့ရဲ့ စိတ်ထားနဲ့ တရားအမြင်ကိုလေ့လာကြည့်ချင်ရင် Living Buddha, Living Christ ကိုဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ခရစ်ယာန်တွေအနေနဲ့တစ်ဝက်လောက်နားလည်နိုင်ပြီး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအနေနဲ့ ကျန်တစ်ဝက်လောက်နားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘုန်းကြီးကတော့ သူ့ရဲ့ နှံ့စပ်သိမြင်မှု၊ ဘက်လိုက်မှုကင်းစွာနဲ့ ဘာသာရေးဆိုတာ ပြဿနာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို လှလှပပလေးသုံးသပ်ပြသွားတာပါပဲ။
အရင်ကလည်း သူ့စာတွေကို ကိုတာ ဘာသာပြန်တဲ့ သုစရိတစက်ဝန်းမှာကတည်းကသဘောကျပြီးသားပါ။ သူဟာ ဘာသာရေးကို ခေတ်နဲ့လျော်ညီအောင်၊လူငယ်တွေနားလည်တဲ့စကားနဲ့ဘာသာရေးကို လူငယ်တွေဆီရောက်အောင်ကြိုးစားနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ခေတ်ဘယ်အခါမှာပဲနေရနေရ သူတော်ကောင်းတွေရှိနေသေးတာ စိတ်ချမ်းသာရပါတယ်။ ။
မြင့်မြတ်မှုဟာ စကားလုံးအပြင်ဘက်မှာရှိပါတယ်။ သူ့ရဲ့အပြုအမှုနဲ့အလုပ်အကိုင်တွေဟာ မြင့်မြတ်ပြီး စိတ်ဓာတ်အဆင့်အတန်းမြင့်မားမှုကိုဖော်ပြနေတာပါပဲ။ စိတ်ချမ်းသာဖို့နဲ့ ဘာသာတရားနှစ်ခုရဲ့ လေးနက်မှုတွေကို အတော်လေးကိုခြုံငုံမိတဲ့ စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ပါပဲ။ SGD 25.15 ဖြစ်ပါတယ်။ Poplular မှာရနိုင်ပါတယ်။ Borders မှာတော့ရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။
Notes: This post is for my mom.
ပုံမှန်အားဖြင့် ဘာသာပြန်တာရေးခဲပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ဖတ်ရတာပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေလည်း စာကောင်းပေကောင်းတွေဖတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ အမေ့ကိုပြောဖြစ်ပါတယ်။ အခုဘယ်စာအုပ်ကိုဖတ်ဖြစ်နေလဲ၊ ဘာလေးတော့သဘောကျတယ်ဆိုတာမျိုး ခဏခဏပြောဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ်၊ အော်ဇီမှာဖြစ်ဖြစ်၊ အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ရတဲ့နေရာတိုင်းမှာအမေ့ကို သတင်းပို့တာပါပဲ။ စာအုပ်ဝယ်ပြီးပြီဆိုလည်း SMS ပို့လို့ရရင် လှမ်းပို့လိုက်တယ်။ အော်ဇီကိုဆိုရင် SMS တစ်ခုကိုမှ စင်ကာပူငွေ ၁၅ ပြားလောက်ပဲကျပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်သာ Callback ခေါ်ရခက်လို့ Direct ခေါ်ခေါ်မိတာနဲ့ ဖုန်းဖိုးက ၁၀၀ အောက်မဆင်းတာကြာပါပြီ။ Sing Tel ရဲ့ Loyalty customer ဖြစ်စပြုနေပါပြီ :P။
ဒီိလိုပို့စ်တွေဟာဖတ်တဲ့သူ အင်မတန်နည်းတတ်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါမျိုးတွေဖတ်ချင်တဲ့သူတစ်ယောက်ယောက်တော့ရှိမှာပဲဆိုပြီးတင်လိုက်ပါတယ်။
Labels: THICH NHAT HANH, Translation
ကိုယ့်ကိုယ်ကို နားလည်ခြင်း၊ တစ်ပါးသူကိုနားလည်ခြင်း...